Garsoore Michael Oliver Oo Ugu Dambeyn Ka Baxay Aamusnaanta Kadib Dhacdadii Santiago Bernabéu – Gool FM
(Englan) 26 Abriil 2018 Ugu dambeyn garsooraha caalamiga ee Michael Oliver ayaa ka baxay aamusnaanta tan iyo dhacdadii kulankii lugta labaad wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League ay kooxaha Real Madrid iyo Juventus ku wada ciyaareen garoonka Santiago Bernabéu.
Michael Oliver ayaa kaga warbixiyay wareysi uu siiyay website-ka rasmiga ah ee FA-ga: “Waxay ahayd maalmo kooban oo kaliya, waa jiray dad badan ee I garab istaagay, waan hafoodey, taas macnaheedu waxay igaaga dhigneed wax badan”.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan noqdo garsooraha dhex dhexaadin doono kulanka kama dambeysta ah ee FA Cup-ka, si aan mas’uul uga noqdo kulankaan waa mid aad u wanaagsan, waa wicitaan aanan waligey ka fileynin.”
Xiriirka kubada cagta ee dalka England ee FA-ga ayaa wuxuu u magacaaway Michael Oliver, garsooraha maamuli doono kulanka finalka koobka FA Cup, ee 19 bisha May ku dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Chelsea.
Francisco Isco Oo Seegi Kara Kulanka Lugta Labaad Ee Champions League